Round Carbon Fiber Tube China Manufacturers & Suppliers & Factory
Round Carbon Fiber Tube - umkhiqizi, ufektri, umhlinzeki waseChina
(Yonke imikhiqizo engu- 24 ye-Round Carbon Fiber Tube)
I-3K Twill matte 30x28x1000mm amashubhu e-100% we-carbon fiber
I-3K Twill matte ikhwalithi ephezulu ye-30x28x1000mm i-100% i-carbon fiber tubes Incazelo Yomkhiqizo I-Carbon fiber tube isetshenziswe kabanzi emikhakheni ye-hi-tech, efana nomshini wezindiza, imishini yokuthunga yesimanjemanje, imboni yezimoto, imishini yezokwelapha, izimoto, ukukhiqizwa kwemishini, ukwakhiwa,...
I-Straight Round Carbon Fiber Tube ye-Octocopter
I-Straight Round Carbon Fiber Tube ye-Octocopter Okugcwele ka-carbon fiber tube's Incazelo Amashubhu we-Carbon fiber roll asongwe alungele zonke izinhlobo zamaphrojekthi wokwakha adinga isisindo esincane semidlalo yokusebenza kweshubhu esingabhekana namandla asuka kunoma iyiphi indlela. I-Carbon fiber tube...
I-1000mm twte matte carbon fiber tube yemidlalo
I-1000mm twte matte carbon fiber tube yemidlalo Izici zeCarbon tube / ipayipi: 1.Introduction I-1000mm ubude i-3K round Carbon Fiberi Tubes Carbon yenziwa nge-carbon fiber eyicwengekile eyenziwe nge-twill enhle noma i-plain weave; Kutholakala ngemibala ehlukahlukene nosayizi (imvamisa ye-3K twill matte); Ama-specound...
I-OD 6X4mm Twill matte Full carbon fiber tube ne-clamp Izici zeCarbon tube / ipayipi: 1.Introduction Lezi zi-3K Octagonal Carbon Fiber Tube zenziwe nge-carbon fiber emsulwa ngensimbi enhle noma i-weave ebonakalayo; Kutholakala ngemibala ehlukahlukene nosayizi (imvamisa ye-3K twill matte); Ama-formula e-Round kabhayili...
I-15X12mm carbon fiber tube enama-clamp Izici ze-Carbon fiber tube / ipayipi: 1.Introduction Lezi zi-3K Twill matte full Carbon Fiber Tube zenziwe nge-carbon fiber emsulwa ngensimbi enhle noma i-weave ebonakalayo; Kutholakala ngemibala ehlukahlukene nosayizi (imvamisa ye-3K twill matte); Ama-specound Round carbon...
I-aluminium bolt entanyeni yesigingci
I-aluminium bolt entanyeni yesigingci I-Aluminium feriorer ingasetshenziswa yonke indawo. I-Aluminium bolt ingasebenzisa entanyeni yesiginci Ngaphandle kwe-aluminium screw, futhi sinama-Screws enziwe ngokwezifiso , ama-Standoffs enziwe ngokwezifiso , ama- Washers enziwe
amashidi we-carbon fiber kanye ne-resin amazon Incazelo Yomkhiqizo: Ishidi lethu le-carbon fiber elingafaki okuqukethwe okungcolile . Usayizi wethu ojwayelekile ngu-400x500mm / 500x600mm futhi sinobukhulu be-0.5-7.0 mm
isikrini sokulalelwayo Amashidi we-Carbon fiber athandwa kakhulu muva nje futhi asetshenziswa kabanzi empilweni yethu.Kungenziwa ifreyimu ye-drone, ifreyimu yepuleti yelayisense, umbusi nokunye. Kunezitayela eziningi ku-company.such yethu njengeshidi le-fiber fiber egcwele, ishidi le-carbon eyakhiwe, umbala we-carbon...
Amashidi we-Carbon fiber wezimoto zomjaho Izinto eziphambili zekhabhoni egcwele ye-carbon fiber ishidi le-canbon.our yekhabhoni ye-T300 kanti uhlobo lwethu lwe-resin luyi- epoxy resin. Sine-T700, kepha intengo inokubiza okuncane Incazelo Yomkhiqizo: Indwangu: 3K Full Carbon
i-carbon fiber sheet drone yokulwa nokushisa
i-carbon fiber sheet drone yokulwa nokushisa Ishidi lethu le-carbon fiber elijwayelekile kuphela lingafinyelela ukumelana nokushisa kwe-Celsius okungu- 160 . Kodwa-ke uma ulidinga lifinyelela ukumelana nokushisa okuyi-Celsius ongu- 220 , singakusiza wenze ngezifiso Incazelo Yomkhiqizo:
umhlobiso we-carbon fiber skateboard
umhlobiso we-carbon fiber skateboard I-Carbon fiber board ine-super hard and light weight advantage, amakhasimende amaningi ayisebenzisela ukwenza i-skateboard. Kungathwala isisindo esindayo futhi kungonakaliseki kalula Incazelo Yomkhiqizo: Indwangu: 3K Full Carbon Fibre Ubukhulu:
uhlaka lombhede wekhabhoni
uhlaka lombhede wekhabhoni Kumafreyimu we-carbon fiber, ngokujwayelekile sizofaka i-chamfer ohlangothini (esiyindilinga noma ye-chamgonal chamfer) ukuyenza ibe yinhle Futhi singangeza imbobo yokubala kuhlaka. Incazelo Yomkhiqizo: Indwangu: 3K Full Carbon
ozimele be-carbon fiber 220c
ozimele be-carbon fiber 220c Iphaneli yethu ye-carbon fiber ifaka phakathi ama-70% T300 nama-30% epoxy. Ingaphezulu le-3k i-weave plate kanti Ngaphakathi yindwangu ye-UD. Incazelo Yomkhiqizo: Indwangu: 3K Full Carbon Fibre Ubukhulu:
amakhandlela e-carbon fiber amashidi wokuzilibazisa
amakhandlela e-carbon fiber amashidi wokuzilibazisa Sino ishidi le-fiber fiber emsulwa, i-G10 Glass Fiber Sheet ne-Carbon Glass Sheet. Phakathi, ishidi le-fiber fiber elicwengekile lidayiswa kahle kakhulu emakethe ngesisindo esikhanyayo nesici se-super hard Incazelo Yomkhiqizo: Indwangu: 3K Full Carbon
i-carbon fiber quadcopter isikhungo sepuleti Usayizi wethu ojwayelekile ungama-400x500mm nobukhulu be-500x600mm.Ngokunye, singakwazi ukwenza ngezifiso Usayizi wethu omkhulu ngu-1500x1500mm Incazelo Yomkhiqizo: Indwangu: 3K Full Carbon Fibre Ubukhulu:
ishidi le-carbon fiber acrylic
370z ikhava yangemuva ye-carbon fiber engemuva
370z ikhava yangemuva ye-carbon fiber engemuva Incazelo Yomkhiqizo: Ishidi lethu le-carbon fiber elingafaki okuqukethwe okungcolile . Usayizi wethu ojwayelekile ngu-400x500mm / 500x600mm futhi sinobukhulu be-0.5-7.0 mm
Amandla aphezulu we-cnc wokusika i-carbon fiber drone plate
Amandla aphezulu we-cnc wokusika i-carbon fiber drone plate Incazelo Yomkhiqizo: Ishidi lethu le-carbon fiber elingafaki okuqukethwe okungcolile . Usayizi wethu ojwayelekile ngu-400x500mm / 500x600mm futhi sinobukhulu be-0.5-7.0 mm
500mm * 500mm * 2mm 3K Carbon Fiber Panel T300 Incazelo Yomkhiqizo: Ishidi lethu le-carbon fiber elingafaki okuqukethwe okungcolile . Usayizi wethu ojwayelekile ngu-400x500mm / 500x600mm futhi sinobukhulu be-0.5-7.0 mm
Round Carbon Fiber Tube I-3K Round Carbon Fiber Tube Woven Carbon Fiber Tube Round Carbon Fiber Exhaust Tube Ama-Round Carbon Fibb Tubes I-Glossy Round Carbon Fiber Tube Round Fiber Tube I-Modulus Carbon Fiber Tube